कसको आँखा जाला यसमा??????????????? | आरोह अवरोह.....
कसको आँखा जाला यसमा???????????????
Posted on Monday, February 15, 2010 No Comments
यो स्तुपा (सेंग)कति राम्रो देखिन्छ जुन दोलखाको माथिल्लो टोलमा रहेको छ । अहिले यसको पुरै रंग खुइलिसकेको ,अनि गजुर ढलेर खस्न लाग्ने अवस्था छ । भन्ने हो भने धेरै नाजुक अबस्था लिएर ठिङ्ग उभिएको छ ।
पहेले पहिले त गुठि हरु मिलेर यसको रंग रोगन अनि मर्मत सम्भार गर्ने काम हुन्थ्यो । त्यो बेला दोलाखालिहरु धेरै थिए अनि दोलखाको लागि केहि गरौ भन्थे त्यसैले दोलखाको विकास धेरै अघिबडिसकेको थियो । तर समयको माग भनौ या रोजगारीको लागि दोलखा छोडेर काठमाडौँ जानेहरुको संख्या धेरै बढेको छ । हुन पनि हो दोलखामा त्यति धेरै रोजगारी छैन खान लाउनको लागि खेति किसानिले मात्र पुग्दैन अनि कामको लागि भए पनि राजधानी पस्नु पर्ने बाध्यता भएको छ । सायद अहिले दोलखामा साना केटाकेटी अनि बाजेबजै बाहेक बस्नेहरु कमै होलान । युवा पुस्तासबै कोहि विदेश त कोहि कता ? त्यसैले दोलखाको विकास हुन सकिरहेको छैन । यो स्तुपा यसकै उदाहरण बन्न सक्छ । सानो खर्च भय पुग्ने भएपनि वास्ता गर्ने अनि राम्रो बनाउनेमा कसैको आँखा जादैन बनाउनको लागि जाँगर कोहि कसैको छैन न छ दोलाखालिको न त छ सरकारको ? खैर , छिटै यसको मर्मत सम्भारमा दोलखाली अनि सरकारको आँखा जावोस यहिनै दोलाखालिको चाहना ......................